" အဆိုတျောအားတီကို အခကြွေီးခနြေတေဲ့ TikTok မှ ဆယျလီမမမြား " - Cele Gabar
နိုငျငံကြျောအဆိုတျောတဈဦးဖွဈပွီး R&Bနဲ့Pop သီခငျြးတှကေို မွူးမွူးကွှကွှသီဆိုလရှေိ့တဲ့ အားတီကတော့ ဖစျေ့ဘှတျချ တဈခှငျ ပရိသတျတှရေဲ့ သဘောကွနှဈသကျခွငျးခံနရေတဲ့ ဟာသဗီဒီယိုလေးတှရေဲ့ မှုပိုငျရှငျ ဆယျလီ မမတှရေဲ့ အခခြေံနရေတာကို “နောကျဆုံးတော့ ကောငျမလေးတဈယောကျ ကို ရှာတှေ့ ခဲ့လပွေီ သူတို့ ၂ယောကျကို ခဈြရတာအမော !! Add ထားတာကို လကျမခံဘူး ခနြေတောဗြာ” လို့ သူရဲ့ လူမှုကှနျရကျ စာမကျြနာမှာဖျောပွထားပါတယျ။
ပရိသတျတှကေို ဟာဒယရှငျဆေး တိုကျလရှေိ့တဲ့ ဆယျလီမမတှကေတော့ ဒီတဈခေါကျမှာတော့ အားတီရဲ့ နာမညျကွီးသီခငျြးဖွဈတဲ့ “ညမှေးပနျး” သီခငျြးတှကေို ဟာသTikTok ဆော့ထားပွီး ပရိသတျအကွိုကျတှနေ့တောလညျးဖွဈပါတယျ။အားတီကတော့ အနုပညာလောကမှာ သီခငျြးတှကေို ကိုယျတိုငျရေး ကိုယျတိုငျသီဆိုတတျသူတဈယောကျဖွဈပွီး အောငျမွငျမှုပနျးတိုငျကို ဆှတျခူးရရှိနသေူတဈယောကျပါ။ အားတီရဲ့ သီခငျြးတှကေ ပရိသတျတှရေဲ့ရငျကို ထိစခေဲ့တာကွောငျ့ ပရိသတျအားပေးမှုကို အခိုငျအမာရရှိထားတာလို့လညျး ဆိုနိုငျပါတယျ။
CeleGabar ပရိသတျကွီးရအေဆိုတျော အားတီကတော့ ဆယျလီမမတှကေို ခဈြလှနျးလို့ add ထားပမေယျ့လညျး မမတှကေလကျမခံပဲ ခခြွေငျးကိုခံနရေပါတယျတဲ့နျော။
Source: Thi Ha Tun
” အဆိုတော်အားတီကို အချေကြီးချေနေတဲ့ TikTok မှ ဆယ်လီမမများ ”
နိုင်ငံကျော်အဆိုတော်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး R&Bနဲ့Pop သီချင်းတွေကို မြူးမြူးကြွကြွသီဆိုလေ့ရှိတဲ့ အားတီကတော့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် တစ်ခွင် ပရိသတ်တွေရဲ့ သဘောကြနှစ်သက်ခြင်းခံနေရတဲ့ ဟာသဗီဒီယိုလေးတွေရဲ့ မှုပိုင်ရှင် ဆယ်လီ မမတွေရဲ့ အချေခံနေရတာကို “နောက်ဆုံး​တော့ ​ကောင်မ​လေးတစ်​ယောက် ကို ရှာ​​တွေ့ ခဲ့​လေပြီ သူတို့ ၂​ယောက်ကို ချစ်ရတာအ​မော !! Add ထားတာကို လက်မခံဘူး ​ချေ​နေတာဗျာ” လို့ သူရဲ့ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။
ပရိသတ်တွေကို ဟာဒယရွှင်ဆေး တိုက်လေ့ရှိတဲ့ ဆယ်လီမမတွေကတော့ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ အားတီရဲ့ နာမည်ကြီးသီချင်းဖြစ်တဲ့ “ညမွှေးပန်း” သီချင်းတွေကို ဟာသTikTok ဆော့ထားပြီး ပရိသတ်အကြိုက်တွေ့နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အားတီကတော့ အနုပညာလောကမှာ သီချင်းတွေကို ကိုယ်တိုင်ရေး ကိုယ်တိုင်သီဆိုတတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ကို ဆွတ်ခူးရရှိနေသူတစ်ယောက်ပါ။ အားတီရဲ့ သီချင်းတွေက ပရိသတ်တွေရဲ့ရင်ကို ထိစေခဲ့တာကြောင့် ပရိသတ်အားပေးမှုကို အခိုင်အမာရရှိထားတာလို့လည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်။
CeleGabar ပရိသတ်ကြီးရေအဆိုတော် အားတီကတော့ ဆယ်လီမမတွေကို ချစ်လွန်းလို့ add ထားပေမယ့်လည်း မမတွေကလက်မခံပဲ ချေခြင်းကိုခံနေရပါတယ်တဲ့နော်။